Literatiora apokaliptika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Apokaliptika (literatiora))
Literatiora apokaliptika na soratra apokaliptika no ilazana ireo boky mirakitra ny faminaniana ara-pahitana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny maha antomotra ny hiafaran'izao rehetra izao sy ny hiavian'ny tontolo vaovao tonga lafatra. Ny soratra fantatra indrindra dia ny Apokalipsin'i Joany ao amin'y Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly. Vitsy ny soratra apokaliptika voaray ho kanona (filamatry ny finoana). Ny maro amin'ny soratra apokaliptika dia apokrifa.
1 Ny soratra apokaliptika kanonika
1.1 Ny soratra apokaliptika ao amin'ny Testamenta Taloha
1.2 Ny soratra apokaliptika ao amin'ny Testamenta Vaovao
2 Ny boky apokaliptika apokrifa
2.1 Apokalipsy apokrifa talohan'ny Testamenta Vaovao
2.2 Apokalipsy apokrifa tamin'ny fotoan'ny Testamenta Vaovao na taoriany
Ny soratra apokaliptika kanonikaHanova
Ny soratra apokaliptika ao amin'ny Testamenta TalohaHanova
Efa misy soratra apokaliptika ny ao amin'ny Testamenta Taloha nefa amin'ny ankapobeny dia miditra anatin'ireo faminaniana mahazatra izany. Ahitana andalana apokaliptika ao amin'ny bokim-paminaniana sahala amin'ny Bokin'i Isaia sy ny Bokin'i Jeremia sy ny Bokin'i Ezekiela sy ny Bokin'i Joela ary ny Bokin'i Zakaria. Ny Bokin'i Daniela dia efa apokaliptika feno.
Ireto avy ireo andalana apokaliptika ao amin'ny Testamenta Taloha:
Isaia 24–27 ("Apokalipsa lehibe"); 34–35 ("Apokalipsa kely");
Ny soratra apokaliptika ao amin'ny Testamenta VaovaoHanova
Tsy ny Apokalipsan'i Joany ihany no boky apokaliptika ao amin'ny Testamenta Vaovao fa na ireo Filazantsara dia ahitana andalana apokaliptika na eskatolojika. Ireto ireo andalana apokaliptika ao amin'ny Testamenta Vaovao ankoatran'ny ao amin'ny Apokalipsin'i Jaona, indrindra ny ao amin'ny Evanjelin'i Matio sy ny Evanjelin'i Marka ary ny Epistily faharoa ho an'ny Tesaloniana:
Ny boky apokaliptika apokrifaHanova
Ny ankabeazan'ny soratra apokaliptika apokrifa (tsy voaray ho kanona) dia mitondra ny anarana hoe "Apokalipsy". Misy karazany roa izy ireo, dia ireo nosoratana teo anelanelan'ny nanoratana ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao sy ireo nosoratana tamin'ny fotoanan'ny Testamenta Vaovao na taorian'io. Ny Protestanta dia miantso an'ireo boky ireo hoe pseodepigrafa.
Apokalipsy apokrifa talohan'ny Testamenta VaovaoHanova
Ireto avy ireo Apokalipsy apokrifa talohan'ny Testamenta Vaovao:
Apokalipsy grikan'i Daniela
Apokalipsiny grikan'i Ezra (na Esdrasa)
Apokalipsy grikan'i Baroka
Apokalipsy siriakan'i Baroka
Bokin'i Henoka (na Henoka etiopiana)
Boky faharoan'i Henoka (na Henoka slava)
Boky fahatelon'i Henoka (na Henoka hebreo)
Ny Bokin'i Henoka (na Henoka etiopiana) dia apokrifa na pseodepigrafa ho an'ny ankamaroan'ny fiangonana fa deoterokanonika izy ho an'ny Fiangonana ortodoksa teoahedo etiopiana. Torak'izany koa ny Bokin'ny Jobily.
Apokalipsy apokrifa tamin'ny fotoan'ny Testamenta Vaovao na taorianyHanova
Ireto avy ireo Apokalipsy tamin'ny fotoan'ny Testamenta Vaovao na taoriany :
Apokalipsy voalohan'i Jakoba
Apokalipsy faharoan'i Jakoba
Apokalipsy voalohan'i Jaona
Apokalipsy faharoan'i Jaona
Apokalipsy fahatelon'i Jaona
Apokalipsy koptan'i Paoly
Apokalipsy gnostikan'i Petera
Apokalipsin'i Samoela sy i Kalamona
Apokalipsin'ny Lanitra Fito
Apokrifan'ny Testamenta Vaovao
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatiora_apokaliptika&oldid=972890"
Dernière modification le 2 Aogositra 2019, à 09:01
Voaova farany tamin'ny 2 Aogositra 2019 amin'ny 09:01 ity pejy ity.